सञ्चार उद्योगको पुनर्उत्थान गर्न मिडिया एलायन्सको जोड « News24 : Premium News Channel
सञ्चार उद्योगको पुनर्उत्थान गर्न मिडिया एलायन्सको जोड
काठमाडौं । मिडिया एलायन्स नेपालले कोरोना महामारीका कारण थला परेको संचार उद्योगलाई पुनर्उत्थान सम्बन्धमा चासो देखाएको छ ।
बिहीबार राजधानीको सोल्टी होटलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि मिडिया एलायन्स नेपालले कोरोनाका कारण संकटमा परेका संचार उद्योगलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा घनिभूत रुपमा छलफलनै गरेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल र भारतका विभिन्न संचार उद्योगी तथा मिडिया संचालकहरुले संचारको आगामी बिकास र व्यवसायिक अभिबृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा छलफल गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष एवं एभिन्युज टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले १२ सय करोडको विज्ञापन बजारलाई २५ सय करोड रुपैयाँको लक्ष्य रहेको सुनाए ।
संचार नीतिको अभावका कारण अर्बौँ लगानी भएको संचार उद्योग टुहुरो भएको पनि उनले औँल्याए । अध्यक्ष राजकर्णिकारले संचार उद्योगी, लगानीकर्ता, पत्रकार, संचारकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरूको हितमा काम गर्न सँधै मिडिया एलायन्स तयार रहेको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै भारतका मिडिया गुरु प्रोफेसर उज्ज्वल के. चौधरीले संचार उद्योगको व्यवसायिक उत्थानका लागि मिडियाले व्यवसायिक योजना ल्याउनु पर्ने औंल्याए ।
उनले विविध संस्था, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायिक व्यक्तिहरुको छवी बनाउने मिडिया आँफैले भने छवी बनाउन नसकेको तर्क गरेका छन् ।
उनले मिडियाका लगानीकर्तादेखि त्यहाँका सबै तहका कर्मचारीहरुले मिलेर मिडियाको छवी बनाउन साझा उदेश्य बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । अहिले मिडिया मिडिया एलायन्स उक्त उदेश्यले अघि बढीरहेको पनि दावी उनको छ ।
त्यस्तैगरी प्रोफेसर चौधरीले मिडिया एलायन्सले सामुहिक एप निर्माण गरी मिडिया एलायन्समा आवद्ध सबै संचारमाध्यमको समाचारलाई त्यसैमा समायोजन गर्दै वितरण गर्ने प्रणालीलाई अगाडि बढाउने गरेको प्रयासलाई प्रशंसा गरेका थिए।
यो कार्यले विज्ञापन बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विस्थापित गर्न सघाउ पुर्याउने उनले दावी गरे । त्यस्तैगरी कार्यक्रममा मिडिया एलायन्सका सदस्य एवं राजधानी न्युज पब्लिकेसनका कार्यकारी अधिकृत आशिष शेरचनले संचार उद्यमीहरूले एक आपसमा सहकार्य गर्नु नै सबैको लागि भलो हुने दावी गरे ।
उनले आपसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नभन्दा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिस्पर्धाले मिडियाको बिज्ञापन बजारमा नकारात्मक असर गर्ने उनको जिकीर थियो ।
त्यस्तैगरी कार्यशालमा बोल्दै महासचिव एवं कामना न्युज पब्लिकेसन्स प्रा. लि. का प्रवन्ध निर्देशक दिरेकलाल श्रेष्ठले सिंगो संचार उद्योगको विकासका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यसका लागि संचार उद्यमीहरूले अहंकार र इश्र्यालाई त्याग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आफ्नो छवीलाई भन्दा समाज र देशलाई बढी प्राथमिकता दिएर संचारमाध्यम अघि बढे लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीका बेला संचारमाध्यमले दिएको योगदानलाई सरकारले बिर्सन नहुने पनि उनको भनाइ थियो । मिडिया लायन्स संचारमाध्यमहरूको व्यवसायिक अभिबृद्धिका लागि गठन गरिएको संस्था हो ।
कार्यक्रममा बोल्ने धेरैजसो वक्ताहरुले मिडिया क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि सरकारले पनि विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।